Bodisma amin'ny fiainana andavanandro - ny toetran'ny Chan Buddhism.
BUDDHISM INDRINDRA FIAINANA
Manao asa saina amin'ny fiainana andavan'andro
Shi Heng Jin no anarako
Miaraka amin'ny an'izao tontolo izao Rainer Deyhle
Ary raha mila tompo Chan vaovao ianao. Ny tompon'ny Chan dia tokony ho toy ny famantaranandro fanairana, tahaka ny fanairana izay mandondona antsika amin'ny fandriana isa-maraina. Tokony hanampy antsika 'hifoha' izy, hanondro amin'ny teboka iray amin'ny rantsantanany nahinjitra.
Ny fomba fiainana, tsy naniry ny ho tonga bodista bodista aho, nahoana aho?
Ny lalina anefa, fantatro fa afaka, tsy maintsy ary tsy izany aho, hanatanteraka io asa io.
30 taona lasa izay dia nandeha tany Chine aho, mankany amin'ny Tempolin'i Shaolin malaza eran-tany, monasitera bodista ao amin'ny faritany Henan. Tany aho dia niara-nipetraka nandritra ny fotoana ela niaraka tamin'ireo moanina momba ny monasitera, namako namana, nianatra kung fu ary nifandray tamin'ny fampianaran'i Buddha.
Rehefa nanontany ahy i Abbot Shi Yong Xin hahita ny ahitra an'ny Tempolin'i Shaolin tamin'ny taona 2000, dia nanakaiky ahy ny fanahin'ny mpampianatra lehibe.
Ny tompon'ny Chan mahay, toy ny tongolo iray, dia afaka manala ny takelaka iray amin'ny toetran'ny olona taloha aorian'izany, mamerina ny lohahevitry ny 'fahazavana' ao anaty ary averimberina ary aorian'ny famohazana.
Tiako ho famantaranandro fanairana fanairana, fanairana ataonao, ilay lehilahy miaraka aminao rehefa mifoha ianao.
Ilay tompo, mpampianatra anao, mpiara-miasa aminao amin'ny dia, namanao.
Bodisma amin'ny akanjo vaovao
Dingana naharitra izany ary nahatonga ahy Bodista.
Tsy afaka milaza ianao fa nitranga iny alina iny.
Tamin'ny fahatanorako dia tsy nahaliana ahy ny fampianaran'ny Bouddha, afaka nitsiky tamim-pitiavana fotsiny aho tamin'ireo olona niresaka karma, fahazavana na fahaterahana indray.
Raha-fu no nahatonga ny filozofia ho an'ny lehilahy masina kokoa sy mahazatra ahy, saingy tsy raisiko tsara. Saingy vao mainka aho liana kokoa tamin'ny heviny, ny fomba milamina sy tony amin'ny fiainana no nahatonga ahy haniry bebe kokoa.
Ny fiezahako mamaky teny amin'ny Bouddha dia tsy voatery ihany koa ny fahombiazana. Na nahita soratra taloha aza aho, voasoratra amin'ny fiteny efa ela, tsy mora vakiana ary sarotra takarina, na nahita fandinihana ara-tantara sy tantara be dia be aho.
Ny teny nampiharihary indrindra fotsiny no hitako fa tena misy ny fampianarany, ny fahazavana. Fantatro ny antony androany. Buddha dia tsy namela torolàlana amin'ny fifohazana ary satria ny ankamaroan'ireo mpanoratra ireo dia tsy mbola nahazo fahazavana mazava.
Raha tsy misy ny fanandramana misy ny fahazavana, na izany aza, ny soratra momba ny Buddhism dia tsy tokony hosoratana. Rehefa niseho tamin'ny taona 2019 ny tantaram-piainako "Shaolin-Rainer", olona maro no nanontany ahy hoe: "Rainer, maninona no tsy mametraka ny sainao amin'ny taratasy"?
Amin'ny maha mpisolovava ahy, dia tsy sarotra amiko ny manoratra soratra masina, fa ny momba ny fampianaran'i Buddha ve aho?
Noho ny fisalasalana kely dia nanaiky aho ary ity no fomba namoronana ny bilaogiko, izay nahatratra olona an-tapitrisany tao anatin'ny fotoana fohy ary afaka vakiana amin'ny fiteny 160 mahery manerana izao tontolo izao.
Raha ny fahitako azy dia tsy fivavahana ny Buddhism, fa filozofia sy fijery eto amin'izao tontolo izao izany.
Tsy nahatsapa an’Andriamanitra mihitsy i Bouddha, nohazavainy mazava fa tsy tokony hotompoina ny olona iray. Nanoro ny mpanara-dia azy hikatsaka fahazavana izy.
Bodisma amin'ny fiainana andavan'andro
Ny Buddhism amin'ny fiainana andavanandro dia midika hoe mitadidy amin'ny fiainana andavanandro.
Izaho, Rainer Deyhle, no Shaolin alemà voalohany fantatra ary nanorina ny Shaolin Tempel Deutschland tany Berlin ary nitantana azy nandritra ny taona maro.
Manazava ny toetran'ny Buddhism Chan (Zen) amin'ny fomba tsotra sy azon'ny saina aho; ny fomba samy hafa fanazaran-tena isan'andro dia fakan-tahaka sy mora azo.
Ao amin'ny fivarotana izao ny bokiko vaovao!
Tiako ny misaotra an'ireo namako sy olom-pantatro rehetra izay niara-nanohy tamiko tamin'ny fiainako ary nanaraka izany mandraka androany. Ireto ny: Ny ray aman-dreniko sy ny zanako vavy, Shi Yan Zi tompoko, ilay abbot Shi Yong Xin, Taema, Ta, Tian Tian & FHY, Georg, Rolf Liem, Carsten Ernst, Shi Heng Zong, Melena, Carsten Römer, Jan R., Bin, Heinz, Yannis, Lufti, Michail, Peter, Ümi, Tien Sy, Stefan Hammer, Andre Mewis, Billy, Traudi, Rainer Hackl, Hurz, Romano, Martin, Ashley, Dr. Zavatra. Misaotra manokana i Karl Kronmüller namako, izay nanomboka ny zava-drehetra tamin'ny boky Shaolin-Rainer, sy i Sven Beutemann, izay nanosika ahy tsy hanomboka hanoratra ho amin'ity pejy ity.
Tempolin'i Abbot Shaolin China
Temple Shinoa Senior Master Shaolin
Kaiserslautern Tempolin'i Abbot Shaolin
Lehiben'ny lehiben'ny tempolin'i Shaolin Kaiserslautern
Ny tompoko Shi Yan Zi
Ny moanina vy
Nanova ny fiainako betsaka ny fihaonana tamin'i Yan Zi. Rehefa niresaka taminy tany amin'ny monasitera aho tamin'izany dia tsy fantatro hoe inona ny fiovana lehibe amin'ity fotoan-fohy ity. Androany Shi Yan Zi dia mitarika ny Tempolin'i Shaolin any Angletera ho an'ny Abbot Shi Yong Xin mendri-kaja. Shifu (Master) Shi Yan Zi, iray amin'ireo mpianatra ambaratonga ambony any Abbot ary lehiben'ny GongFu fanta-daza teo amin'ireo moanina Shaolin miisa 34. Shi Yan Zi dia nianatra tao amin'ny Martial Arts College of Shaolin tamin'ny 1983 ary lasa mpianatra mivantana an'i Abbot Shi Yong Xin tamin'ny 1987.
Ho any amin'ny tempoly UK
Miala amin'ny ratsy rehetra, mamorona ny tsara rehetra, manadio ny vavolenta. Ity no fitafiana Buddha tsy miova.
Koa ny Buddhism dia mampianatra antsika ny andraikitra, maneho amintsika izany fa tompon'andraikitra tanteraka amin'ny ataontsika sy izay tsy ataontsika isika, ary tsy afaka manome tsiny ny hafa isika. fa tsy maintsy hahatratra zavatra isika amin'ny alàlan'ny herintsika sy ny ezaka ataontsika manokana. Manoro lalana antsika i Buddha, saingy tsy maintsy mandeha amin'izany isika.
TOROHEVITRA FARANY hatrizay tamin'ny Blola
Admin2020-04-08T07:59:55+02:00Aprily 8th, 2020|0 Comments
Fanofanana amin'ny Internet maimaimpoana
Admin2020-04-08T06:38:44+02:00Aprily 8th, 2020|0 Comments
Tsy afaka mitsara aho raha mahaliana anao ny tantarako.
Miaina sy misy aho, nanaiky ireo fanamby, kivy, fa nitolona hatrany hatrany ny tongotro. Tsy azo atao ny mamerimberina. Tsy te hanafina aho fa reharehan'ny avonavona iray aho. Angamba ianao afaka mahatsapa zavatra tsara eto koa ka entinao miaraka amin'ny hevitrao.
Copyright © 2019 Shaolin Rainer - namolavola ❤ nataon'ny olona lehibe. fisian'ny | Privacy | fifandraisana
Mampiasa mofomamy hanatsarana ny fanandramana. Izahay dia manaiky fa manaiky ianao, saingy afaka misoratra anarana ianao raha maniry ianao. Fikirana CookieMANAIKY
ilaina mavitrika foana